हनिमुन नसकिदै मुख्यमन्त्री राईलाई ‘धर्मसंकट’ ! – NepalajaMedia
हनिमुन नसकिदै मुख्यमन्त्री राईलाई ‘धर्मसंकट’ !
January 27, 2021 322
काठमाडौं । नेकपाका नेता, पूर्व केन्दि्रय मनि्त्र एवं वर्तमान प्रदेश सरकारका प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई धर्मसंकटमा परेका छन् । आइतबार मात्रै विवाह बन्धनमा बाधिएका राईमाथि विवाह खुसीको खबर भएपनि मुख्यमन्त्री पद भने खुसि्कन लागेको चर्चा हुन् थालेको छ ।
काठमाडौंका आलिसन पार्टी प्यालेसमा विहे गरेर हनिमुनको रौनकमा रहेका मुख्यमन्त्री राईवि’रुद्ध अहिले नेकपाका आफ्नै समूहका नेताहरु पनि रुष्ट भएका छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदलाई आफूतिर तान्ने प्रयासमा रहेका मुख्यमन्त्री राई आफ्नै समूहका सांसद अर्कातिर लागेकोबाट भने बेखबर छन् । त्यसमाथि कांग्रेसले राईलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका २१ जना सांसदमध्ये अहिलेसम्म राईको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने सांसदको संख्या ५ जनामात्रै रहेको स्रोत बताउछ । संसदीय दलका नेतादेखि प्रमुख सचेतक, सचेतक पनि मुख्यमन्त्री राईलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रदेश १ को संसदीय दलमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका सांसदको संख्या अल्पमत छ ।
त्यसैले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षमा सांसदहरु मुख्यमन्त्रीमा राईलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । बरु मुख्यमन्त्री नभएपनि हुन्छ तर राईलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने अभियान सुरु भएको छ ।
अहिलेसम्म १६ जना सांसद वरिष्ठ नेता पौडेलको पक्षमा देखिएका छन् । संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, प्रमुख सचेतक केदार कार्की खुलेरै मुख्यमन्त्री राईको वि’रुद्धमा लागेका छन् ।
त्यसैले मुख्यमन्त्री राईले काठमाडौंमा विहेको रमाइलो विताउँदै गर्दा प्रदेश– १ मा भने मुख्यमन्त्रीवि’रुद्धको गठजोड बलियो बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री राईको हनिमुन अवधि नसकिदै मुख्यमन्त्रीबाट हट्नै पर्ने परिस्थिति दैलोमा खडा भएको चर्चा विराटनगरमा सुरु भइसकेको छ ।
Prevक्या,न्स,र पिडित करिष्मा पुन मगरलाई सके सहयोग नसके सक्दो सेयर गर्नुहोस् सहयोग गर्नुहोस्
Nextसाह्रै दुखद खबर : साँढेको आ:क्र’म’णबाट ८० वर्षीया वृ:द्धाको मृ:त्यु !
श्वेतासंग वि’वादपछि लाखौ खर्च गरेर सुष्मा दिइन् कल्बमा पार्टी, को पुगे उनको पार्टीमा ? (भिडियोसहित)
झुक्किएर पनि खानुहुँदैन ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले यस्ता खानेकुरा, नत्र ज्यानै जान सक्छ ।
दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु
हरेक दिन १० वर्षमुनिका एक जना बालिकामाथि बलात्कार
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (7150)
नेपालमा पनि यति गते बाट टिकटक बन्द हुदै (3278)
यी हुन् कलेजो बिग्रिएको थाहा पाउने ५ संकेत ! (1754)
Breaking News: अचानक भर्खरदेखी काठमाडौंका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (1483)
नेपालमा पहिलोपटक एकै दिन कोरोनाले छ जनाको मृत्यु (1265)
आ’फ्नै जीवनमा आधारित यति मिठो गीत रेकर्ड ग;राए अर्जुनले ..( भिडियो हेर्नुहोस् ) (1216)
काठमाडौँको एक निजि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई १२ दिन राखेको बिल आयो २६ लाख तर बाचेन बिरामी, पैसा दिएपछि मात्रै सेनाले शव लैजान पायो (1144)
मलेशियामा सुरक्षा गार्ड कुट्ने सुपरभाइजरद्वारा आत्मसमर्पण, कुट्ने कुटाइ खाने दुवै नेपाली (1122)
काठमाडौंको जग्गाको मूल्याङ्कन बढेन, ललितपुरमा प्रति आना १२ सय ! (1098)
कोरोनाका बिरामीले भरिएको अस्पतालमा आज अचानक भयानक आगलागी, ८ जनाको मृ त्यु (1049)
आपत्तिजनक भिडियो लिक भएपछि मन्त्रीले दिए राजीनामा
सानै देखि चतुर थिए बलिउडका चर्चित नायक सलमान खान (तस्बिर सहित)
एक अध्ययनमा यो कुरा बाहिर आएको छ कि जुन मान्छेको श्रीमती मोटी हुन्छ तिनीहरु आफ्नो वैवाहिक जीवनमा निकै खुशी रहन्छन्
कुन रोगका कारण कहाँ आउँछ डण्डिफोर ? हटाउने सजिलो तरिका
पतिपत्नी बीच झगडा भइ रहन्छ भने अप्नाउनुहोस् यी उपाय